विन्डोज | मा छिटो र सफा बुट को लागी सल्लाह ग्याजेट समाचार
ट्रिक्स: विन्डोजको सफा र छिटो बुट कसरी गर्ने
के तपाइँसँग विन्डोजमा स्टार्टअप वा बुट समस्याहरू छन्? यस प्रकारको अवस्था धेरै व्यक्तिहरूमा हुन सक्दछ, जसमा अपरेटि system प्रणाली चल्ने सुस्तता मात्र समावेश छ, तर केही त्रुटिहरू पनि बिना कारण देखा पर्न सक्छ, र कम्तिमा अपेक्षित क्षणमा।
उदाहरण को लागी, विशिष्ट «निलो स्क्रिनMany धेरै विन्डोज प्रयोगकर्ताहरूले सामना गर्नुपरेको सबैभन्दा कष्टकर लक्षणहरूमध्ये एक हो, र उनीहरूले यस समस्यालाई समाधान गर्न को लागी प्रयास गर्नुपर्दछ «फेलसेफ मोड«। यदि तपाईंले निश्चित समयमा यस प्रकारको कार्य गर्नुभयो भने, तपाईंले यो महसुस गर्नुहुनेछ अपरेटिंग प्रणाली परम्परागत भन्दा छिटो शुरू भयो। मूलतः त्यो विचार हो जुन हामी अहिले प्रयोग गर्दछौं, कि हामी यस सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नेछौं ताकि हाम्रो अपरेटिंग प्रणाली परम्परागत भन्दा छिटो गतिबाट सुरु हुनेछ।
1 के हामी विन्डोजलाई "सुरक्षित मोड" मा सुरू गर्न सक्छौं?
2 विन्डोजमा लगऑन सेवाहरू असक्षम गर्नुहोस्
3 विन्डोजमा थोरै प्रयोगको साथ अनुप्रयोगहरू असक्षम गर्नुहोस्
4 विन्डोजमा अनुसूचित सुरुवात सुविधाहरू असक्षम गर्नुहोस्
के हामी विन्डोजलाई "सुरक्षित मोड" मा सुरू गर्न सक्छौं?
अवश्य पनि यो हो, जबसम्म हाम्रो अपरेटिंग सिस्टमले केही प्रकारका समस्या वा असुविधाहरू प्रस्तुत गर्दछ; दुर्भाग्यवस, यो "फेलसेफ मोड" आउँदछ महत्वपूर्ण अपरेटिंग सिस्टम सुविधाहरू असक्षम गर्नुहोस्, जुन व्यावहारिक रूपमा केहि अनुप्रयोगहरू र उपकरणहरू जुन हामी दैनिक आधारमा कार्य गर्दछौं चलाउनबाट रोक्छ। त्यसकारण हामी यस मोडमा सहि ढ work्गले काम गर्न सक्दैनौं तर यदि हामीले विन्डोज परम्परागत ढ starts्गले सुरु गर्दछौं भने यसको सिद्धान्त अपनाउन सक्दछौं यदि हामीले केही युक्तिहरू अपनाउँछौं भने।
विन्डोजमा लगऑन सेवाहरू असक्षम गर्नुहोस्
धेरै अवसरहरूमा हामीले कार्यका यी प्रकारहरू र विकल्पहरूको उल्लेख गरेका छौं विन्डोज स्टार्टअपको गति बढाउनुहोस्यद्यपि अब हामी केहि थप तरिकाहरू संकेत गर्नेछौं जुन तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ताकि अपरेटिंग सिस्टमको स्टार्टअप तपाईसँग भेट्न सक्ने जस्तै मिल्दो छ, «सुरक्षित मोड» को साथ। पहिलो उदाहरणमा तपाईले गर्नु पर्छ "msconfig" कल गर्नुहोस् परम्परागत तरिकामा (विन + किबोर्ड सर्टकटमा निर्भर)।
एकचोटि तपाईंसँग यो उपकरणको विन्डो भए पछि तपाईंले "सेवाहरू" ट्याबमा जानुपर्नेछ; पछि तपाईंले तल बायाँमा बाकस सक्रिय गर्नुपर्नेछ Microsoft लाई सम्बन्धित सेवाहरू लुकाउनुहोस्, किनभने यसको साथ तपाईं अपरेटिंग प्रणालीमा केहि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू हटाउनुहुने छैन। अन्त्यमा, तपाईंले भर्खरै बटन थिच्नु पर्छ जुन "दाँया निस्क्रिय गर्नुहोस्" मा तल्लो दायाँपट्टि क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो कम्प्युटर पुन: सुरु गर्नुहोस्।
विन्डोजमा थोरै प्रयोगको साथ अनुप्रयोगहरू असक्षम गर्नुहोस्
यस विन्डोमा जुन हामी यस पल्टमा छौं, तपाईं थप प्रकार्य प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ; यो गर्न सकिन्छ यदि तपाईं अर्को ट्याबमा जानुहुन्छ, त्यो हो, जसलाई नाम "विन्डोज स्टार्ट" छ।
त्यहाँ एक पटक, तपाईंले ती अनुप्रयोगहरूको सम्पूर्ण सूची खोजी सुरू गर्नुपर्नेछ जुन तपाईं "प्रयोग नगरिएको" मान्नुहुन्छ; यस अवस्थामा तपाईले ती सबैलाई निस्क्रिय गर्न सक्नुहुन्न किनकि यहाँ कुनै बाकस छैन जसले ठूलो महत्व राख्नेलाई चलाउँदछ जुन हामीले अघिल्लो टिपमा उल्लेख गरिसक्यौं। तपाईंले यी मध्ये कुनै एक छान्नु पर्छ यसको प्रत्येक बक्समा अनुप्रयोगहरू ताकि यसको सक्रियता हराउनेछ र पछि «लागू गर्नुहोस्» बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
विन्डोजमा अनुसूचित सुरुवात सुविधाहरू असक्षम गर्नुहोस्
यो विकल्प ती मानिसहरु द्वारा गर्न सकिन्छ जो आफैंलाई अरु केहि विशिष्ट विन्डोज प्रयोगकर्ताहरु लाई मान्दछन्; यो किनभने हामीलाई थाहा छ कि के कार्यहरू वा सेवाहरू जुन विन्डोज एक निर्धारित आधारमा चल्दछ, केहि चीज जुन हामी सायद सायद जान्न सक्दछौं, जे भए पनि हामी केही अन्तर्ज्ञानले टाढा जान्दछौं।
पहिले जस्तै, यहाँ हामीले function नामको प्रकार्य कल गर्नुपर्नेछतालिका नियन्त्रण«, यसमा हामीले किबोर्ड सर्टकट after Win + R using प्रयोग गरेपछि यसलाई लेख्नु पर्छ; यससँग, विन्डो स्वचालित रूपमा देखा पर्नेछ जहाँ विन्डोज द्वारा कार्यान्वयन गरिएका सबै प्रकार्यहरू निर्धारित आधारमा उपस्थित हुन्छन्। हामीले केवल तिनीहरू मध्ये कुनैलाई माउसको दायाँ बटनको साथ चयन गर्नुपर्नेछ र प्रासंगिक मेनु विकल्पको माध्यमबाट यसलाई निस्क्रिय गर्नुपर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » ट्रिक्स: विन्डोजको सफा र छिटो बुट कसरी गर्ने
स्टारक द्वारा अविश्वसनीय तोता Zik 2.0 को अनबक्सि।
Online अनलाइन उपकरणहरू वेबबाट लेखलाई PDF कागजातमा रूपान्तरण गर्न